रक्सी पिउँदै नपिउँने, पिएमा के गर्ने ? एक पल्ट पढ्नै पर्ने लेख - ज्ञानविज्ञान
– सुदिप पोख्रेल –
मदिरा खाँदा शरीरमा कुनैपनि किसिमको रोग नभएको हुनुपर्छ । मुटुको धड्कन बढ्ने, मुटु सुन्निएको अबस्था, कलेजोको समस्या भएको, दीर्घरोग लागेको र डाक्टरले बन्देज गरेको व्यक्तिले मदिरा सेवन गर्नु हुदैन । अल्कोहल धेरै खादाँ मुटुको धड्कन बढ्ने, उच्च रग्ताचाप हुने, मस्तिस्कघात हुने र बेहोस तथा मृत्यु हुने सम्भावना हुन्छ । हालसालै रटगर्स युनिभर्सिटि अमेरिकाले गरेको अनुसन्धानले अल्कोहल धेरै मात्रामा सेवन गर्दा डिएनएमा क्षति पुग्ने र त्यसले तपाइको ब्रेनले काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन गरिदिने निष्कर्ष निकालेको छ । जसले गर्दा जति धेरै रक्सि सेवन गर्यो उति धेरै नै सेवन गर्न मन लाग्छ, जुन खराब कुरा हो ।
(लेखक : खाध्य प्राविधिका बिद्यार्थी हुन् ।)
तपाईलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो ? हाम्रो जानकारीहरु अरुलाई पनि देखाउन कृपया सेयर गर्नुहोला ।तपाइको एक सेयरले थाहा नभएकाहरुले ज्ञान पाउछन भने हामीलाई पनि सहयोग हुनेछ । धन्यवाद ।
Don't Miss it कसरी अपनाउने स्वस्थ जीवनशैली ? अत्यन्तै महत्त्वपुर्ण जानकारी, पढेपछि सेयर गर्नुहाेला
Up Next हामीले खानेकुरा पकाउँदा त्यसको पोषक तत्व कसरी सुरक्षित राख्ने ? जान्नैपर्ने कुरा